トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Mail ka qowladda pachinko aan waxtar lahayn ee horyaalka si ay u doortaan
Waxaad tahay, in ganacsi e-mail qowladda pachinko ah, ama wuxuu ahaa content isla mar kasta, waxaan u malaynayaa in ay jiri karaan dad badan oo aad hesho farriin ah in ay dareemaan in aysan ahayn mid aad u faa'iido badan. In qowladda pachinko ah, oo ka hadlaya haddii aad tahay sababta samatabbixin mail, dhab ahaantii, sabab aasaasiga ah waa in ay soo jiitaan macaamiisha ujeedada, ma si mail inuu ku guuleysto macaamiisha ah. Well, xataa dhinaca loo dhiibay, si aanay u qaadi ujeedka qowladda pachinko ah, e-mail aan waxtar lahayn, waxaan rajaynayaa marka aad iska tuur og isbeddel.
ee ganacsi e-mail ah sida qowladda pachinko ah, waxaa jira astaamo qaar ka mid ah.
boostada inaad u sheegto ruuxa dagaalka la saaro ee, u saaray in maanta carbuunta, waa email ee ujeedada kaliya ee soo jiitaan macaamiisha ka hawlgala mail Ujeedada, la soo dhaafay ee ujeedada wargelinta ah ee ay dhacdo. In this, waxaa jira mail ah in wanaag ah oo aan waxba ugu xataa helay.
Waa qalliin loogu talagalay email labaad oo kaliya macaamiisha loogu talagalay soo jiitaan. In ka e-mail ku jira sida, had iyo jeer ka hadlayay sheeg marka inta badan ay gaaraan, 's ee duhurkii iyo fiidka. Waxaa ka mid ah emails badan gaadho e-mail maalintii, in laga yaabaa in aan ugu akhriyo, waa qadada ah ee mail. Haddii aanu jirin subax
hawlgalka, maxaa yeelay waxa ay inta badan waa soo diro, wax wayn aanu ka beddeli subaxdii sidoo kale e-mail iyo content. Waxaan mail in si buuxda uu ula jeedo howlgalka kaliya.
iyo fiidkii waa e-mail, laakiin haddii aad leedahay ganacsi caadiga ah waa ku dhawaad ??saamaynta wada jir ah ula mail subaxdii. Si loo guuleysto doonista in ay booqdaan in macaamiisha fiidkii, waxa ay noqon doontaa boostada prompt booqashada in macluumaad ay dhacdo, iyo sidii maalintii.
dhacdo weyn, okay aan eegaya ugu mooyee. Si kastaba ha ahaatee, fiidkii e-mail ah maalintii ayaa lagu qabtay munaasabad weyn, sababtoo ah waxaa jira kiiska ah oo warbixin gaar ah oo waxtar leh waa on, fadlan isku day in aad hubiso.
tusaale ahaan, ogeysiisyada, iwm dhawaaqay darajayn iyo farqiga u dhexeeya saacadaha u dhexeeya madal furan oo lagu dhawaaqayo iyo habka bakhtiyaanasiibka jidka marinka, waxaa laga yaabaa inaad wax. Intaa waxaa dheer, e-mail aan waxtar lahayn in ay e-mail soo socda oo kaliya socda Ujeedada, dhacdooyinka Waa dhawaaqay khamaar mail.
ku filan in wajiyada dhacdo weyn, waxaa lagu si joogto ah u soo diray laga yaabaa, laakiin ma beddeli content ugu waqti kasta. Marka aan akhriyey, waxaas waxaa inta badan ku sameeyeen ka kooban yahay email ah ammaan la'aan akhriska ka dib.
macluumaad muhiim ah, oo inta badan u soo galeen habeenkii mail maalin ka hor dhacdada, ma aha mid aad u faa'iido leh sida e-mail lagu jiro shaqada ee caadiga ah. Isagoo ka hadlayay of noocan oo kale ah muuqaalada e-mail aan waxtar lahayn iyo, subaxdii ama ma beddelo e-mail iyo content, isku day in aad tixraac maxaa yeelay waxa ay ka timaaddaa diro mail subaxdii sida ay mar kale waa.
maxaa yeelay, waxaa sidoo kale ay gaaraan mail waxa emails maalin kasta, waxaad noqon jirrabay in la joojiyo bixinta iyo u arkay oo keliya mail aan waxtar lahayn. In mail samatabbixiyey maalin kasta, iyo marka uu soo gaadho mail ama muhiim ah, inaad Markii aan akhriyey meeshii waa in loo arkaa in waxyaabaha ka ilaalinayeen isticmaalka meel ku oolsan.